ဗိသုကာပညာရုပ်ရှင်ပွဲတော်, မော်တော်ကားကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးရုပ်ရှင် Paint, polyester ရုပ်ရှင်ပွဲတော် - Yihe
+86 13921637899 / + 86 13270388085
ဗိသုကာ Window ရုပ်ရှင်ပွဲတော်
အော်တို Glass ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးရုပ်ရှင်ပွဲတော်
Funiture ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးရုပ်ရှင် Paint
Holographic Projection ရုပ်ရှင်ပွဲတော်
Chang zhou Yihe Composite materials Co.,Ltd isaservice-oriented enterprises. We can give you professional services in the electronics industry and engineering industry. Our company is specialized in develop, produce,sale the color polyester film and give technical support as customers need.Our products have Insulated film,Coating film ,Solar battery back basement membrane,Haze film. ငါတို့သည်လည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နှင့်ကေဘယ်လ် insulator တွင်လည်း, SMC ဖြစ်စေသောစပါး, အစားအစာထုပ်ပိုး, စသည်တို့များအတွက်ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီအပေါများနည်းပညာခွန်အားနှင့်ခိုင်ခံ့သောလွတ်လပ်သောသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစှမျးသတ်တိ။ ကျနော်တို့စိတ်ရင်းမှန်နဲ့ဖောက်သည်အိမ်မှာနှင့်ပြည်ပနှင့်အတူသစ္စာဝါဒီပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုစတင်နိုင်ရန်မျှော်လင့်နေကြသည်။
Switchable Magic Pdlc Smart Film For office hot...
မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည် PPF သည်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးရုပ်ရှင် Ther Paint ...
စက်ရုံ Transparent TPU PPF သည်ရောင်းအားဖုန်-သက်သေပြ ...
Chang zhou Yihe Composite ပစ္စည်းများ Co. , Ltd မှဝန်ဆောင်မှု-oriented လုပ်ငန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့သင်အီလက်ထရွန်းနစ်စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အင်ဂျင်နီယာစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်န်ဆောင်မှုကိုပေးနိုင်ပါသည်။
Adress: အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ APRTMENT, သွက်လက် PROTERTY STAR မြစ်, XINBEI ခရိုင်, Chang Zhou CITY
ဖုန်းနံပါတ်: +86 15261166707
E-mail ကို: rean@cnyahea.com
Skype ကို: 13270388085
© Copyright - 2010-2019 : All Rights Reserved. လမ်းညွှန် - Featured ထုတ်ကုန်များ - မြေပုံအညွှန်း - မိုဘိုင်းဆိုက်ကို
ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးရုပ်ရှင်ကား, စားနပ်ရိက္ခာအဆင့် Stretch ရုပ်ရှင်ပွဲတော် , ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးရုပ်ရှင် , ကားတစ်စီးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, မော်တော်ကားရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး Paint , anti-Fog ရုပ်ရှင်ပွဲတော်,